トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Horukon high-phawu-ukubona indlela yokubeka
E Horukon capture, oko kuthiwa ziye zabekelwa hlula. shop pa, ukuba Uchikome kwiintengiso target Horukon, kwaye ngokukhululekileyo ukubala izinga unciphiso, wathi ukuba ukulawula intlawulo.
Ulawulo oluntlawulo a ngokwamaqela ezine emihlanu kwiimeko ezithile kuma, Ukuba uthe waba ixesha elimisiweyo, uya kuthiwa ukuba inkqubo leyo sokunikela lo jackpot. Kwakhona, iqela emiselwe Horukon, xa khupha ezi jackpot, ROM ithoni iye ukuba bakhethe ukuma okuqinileyo.
umoya okanye ubunzulu base ezamahala okanye ROM ocaphukileyo stand itafile kuye ukuba kukho ngaphantsi kusenokwenzeka ukuba ekhethiweyo. E
, abo usenokucaphula capture Horukon kukuthi, yintoni uhlobo lokuziphatha singathanda ukuba bajonge into yangena eliphezulu-iseti xa Ndavuka. Ukuze ukuphakama
sentlalo ngelo xesha, amaxesha amaninzi uluvo njengoko zesiganeko lubonakala ekupheleni kwetafile jackpot kukuba kukho into ezifana ibhola ayahamba yeBhodi ukumvumela kwasekuqaleni. Ibhola into egxothiweyo kwiibloko eziqhelekileyo, uya kuzama Ochiyo ngezantsi ngokunxulumene nomtsalane.
wabetha isikhonkwane ngelo xesha, okanye kuwa phantsi Bouncing kwi-engile ezahlukeneyo, wena okanye wangena ekuqaleni. In eliCebisayo okuthethiweyo kulo capture Horukon, liye laba izinto kwabelwa udibaniso transformer. Xa
Horukon ukumisela iqela le jackpot, izinto amandla magnetic, ukuba yazi ukuba kukho ukuqonda kokuba ibhola ingqalelo. Kwaye ngoko, Toka uba nzima ukunciphisa ibhola, nina ukuba wamvusa, ezifana ibhola nge-udlula kakuhle.
izizathu zokuba kutheni oku kwenzeka kwakhona of_ Danka izakubanye njenge isizathu echazwe apha ngasentla.
kunye, oko kuthiwa ezahlukeneyo ngezenzeko kwanaxa jackpot uya kuza etafileni yakho kwenzeka, ngokoluvo iqhelekileyo phakathi kwabo, kwezinye etafileni qela linye, ukufikelela super Atsurichi enamandla uhlale kwenzeka, oko kwenzeka ukuba athambise. To
ukuphakama sentlalo ngelo xesha, per enkulu Ri xa kusenzeka, kuthiwa anokuthi ususe avareji izikhululo 9 nganye Chang, iseti ephakamileyo ngelo xesha, kukho kwakhona ingcamango yokuba kungenzeka ukuba qela linye kukuphumelela nokuzimisela jackpot iphezulu.
Ukongeza, xa isigqibo iqela elandelayo sele yenziwe, kodwa abanye abantu beza phezu ibhola ukuqalisa mandundu.
kunye isicwangciso omkhulu ngexesha jackpot lotto sele kuthiwa rhoqo kuloo ndawo, wena lotto amaxesha 4 ngeyure nganye kufuneka wenziwe ngaphandle.
okanye ngaphezulu, kuba isenzeko okwenzeka kwindawo ephakamileyo yangoku Horukon sentlalo ngelo xesha.
Ngale ndlela, siye sazama ukuba ukuqalisa ekuqhelekileyo edla ukuba kuthiwe ukuba wayeza Idla ngokuvela.
Kuba Horukon capture indlela yokuziphatha, kubalulekile ukuba uyakholwa nguwuphi kuba akukho mbono. Emva koko, kukho ingqokelela kuphela amava ixabiso in practice.